ⓘ ဂျူလီယန် အက်စ်ဆန်း
ဂျူလီယန် အက်စ်ဆန်း သည် ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်မာနှင့် အစိုးရများ၏ ကန့်သတ် သတင်းအချက်အလက်များကို ပေါက်ကြား ဖော်ထုတ်သည့် ဝက်ဘ်ဆိုက် ဝီကီလိခ်ကို တည်ထောင်သူ ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ဝီကီလိခ်ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ဘတ်ဂဒတ်မြို့ လေကြောင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရသည့်ဗီဒီယိုအား ဖွင့်ချပြီးနောက် နိုင်ငံတကာ၏ အာရုံစိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်မှ ဂျူလီယန် အက်စ်ဆန်းအား ရာဇဝတ်မှုပုဒ်မှဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးစတင်ခဲ့ပြီး မဟာမိတ်နိုင်ငံများကို ပူးပေါင်းရန် အကူညီတောင်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ဆွီဒင်နိုင်ငံမှ ဂျူလီယန် အက်စ်ဆန်းကို နိုင်ငံတကာဝရမ်းဖြင့် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ၃ လကြာ မုဒိန်းမှုဖြင့် စစ်ဆေးခဲ့သည်။ သူသည် ဆွီဒင်နိုင်ငံ၏ စွပ်စွဲချက်များကို ဆက်တိုက်ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နေ့တွင် ယူကေနိုင်ငံ၌ ကိုယ်တိုင်အဖမ်းခံခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အီကွေဒေါနိုင်ငံ၌ ယာယီခိုလှုံခွင့် ရရှိခဲ့သည်။
စစ်တုရင် ကစားရသလိုပဲ၊ အင်တာနက်ပေါ်မှာ မွှေနှောက်ရတာ သိပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ ပုစ္ဆာတွေအားကြီးပဲ” ဟု အက်စ်ဆင်းက နယူးယောခ့်ကာ မဂ္ဂဇင်းကို တစ်ခါက ပြောပြဖူးသည်။ သူ့မိခင်က သူ့သားကို မည်သည့်ဘာသာရေး ဩဇာအောက်မှာမှ မထားပေမယ့် အက်စ်ဆန်းဟာ သိပ်နူးညံ့ကြောင်း၊ ပျော်ပျော်နေတတ်ကြောင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များနှင့် စကားပြောနေတတ်ကြောင်း၊ မြင်သလိုထင်သလို လုပ်ချင်သောစိတ် ပြင်းပြကြောင်း ပြောသည်။ ဩစတြေးလျ မဲလ်ဘုန်း တက္ကသိုလ်တွင် သင်္ချာနှင့် ရူပဗေဒ အထူးပြုလေ့လာခဲ့သည်။
အက်စ်ဆန်းက အင်မတန် မိုးပြန်အောင် ပွေလီရှုပ်ထွေးနေသည့် ကွန်ပျူတာစနစ်များကို ထွင်းဖောက် hack နိုင်သူဖြစ်သည်။ စာကြီးပေကြီးများလည်း အရူးအမူးဖတ်သည်။ အာဖရိကသို့ ခရီးထွက်ရခြင်းကို အနှစ်ခြိုက်ဆုံးဟု ပြောတတ်သည်။
3. အင်တာနက် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ဖြစ်လာခြင်း
အက်စ်ဆန်းက CNN အင်တာဗျူးတွင် ပြောပြဖူးတာ ရှိသည်။" လူတွေက ဝီကီလိခ်က လုံးဝမှန်ကန် ယုံကြည်ရတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေပေးတယ်လို့ ယုံကြည်လာကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့က သတင်းဇာတ်လမ်းတွေရဲ့ မူလအချက်အလက် ရင်းမြစ်တွေ primary source တွေကို ချပေးနိုင်လို့၊ ပြီးမှ အဲဒီ့အချက်အလက်တွေပေါ် သုံးသပ်ရေးကြတာ။ primary source မပါဘဲ ဘယ်တော့မှ ရမ်းဖော်ပြတာ မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ကို ယုံကြတာပေါ့” ဟု ပြောထားသည်။ တကယ်လည်း သူက ဖွက်ထားတဲ့ မူလရင်းမြစ် အနှိုက်ကောင်းသူ။
4. ကျော်ကြားမှု ဝိရောဓိများ
အက်စ်ဆန်းရဲ့ ခံယူချက်နှင့် သီအိုရီကတော့ ရှင်းနေသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံး လုံးဝလုံးဝ ပွင့်လင်းမြင်သာရေး total transparency ရှိဖို့၊ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိဖို့တဲ့။
5. ဝီကီလိ ခ် နှင့် မြန်မာ
Wikipedia: ဂျူလီယန် အက်စ်ဆန်း